Ma anfacayso kuwaas Shafeecada kuwa Shafeeca.
Maxaase u sugnaaday iy waanada uga Jeedsadaan.
ood u moodaa Dameero Diday.
oo ka Cararay libaax.
Haddana wuxuu dooni midkasta oo ka mida warqado Qoran (kitaab).
Saas ma aha Ee kama yaabayaan Aakhiro.
Waxaa sugan in Quraanku waana yahay.
Ruuxii Doona yaana waantoobi.
Mana Waantoobayaan in Eebe Doona Mooyee, Eebana wuxuu mutaa in laga Dhawrsado, wuxuuna Ehel u yahay inii Dambi Dhaafo.
Waxaan ku dharaan maalinta qiyaame.
Waxaan ku dhaaran (oo kale) nafta Dagaasha (Saaxiibkeed) (Ee waa la idin soo bixin).
Ma wuxuu u maleeyay Dadku inaanaan kulminhaynin lafihiisa.
Saas ma aha ee waan karraa inaan sinno (soona Celinno) Farihiisa.
Wuxuuse Dooni Dadku inay ka Gaaloobaan waxa ka horreeya.
Wuxuu waydiin waa Goorma Maalinta Qiyaame.
Markase Araggu Wareero (Taagmo).
Lana Kulmiyo Qorraxd iyo Dayaxa.
Wuxuu Dhihi Dadku Maalintaas xagee loo cararaa.
Saas ma aha ee ma jiro wax la magan Galo (Eebe Mooyee).
Xagga Eebahaa yaana Maalintaas loo ahaan.
Waxaa looga warrami dadka Maalintaas wuxuu hormarsaday iyo wuxuu Dibmarsaday.
Ruux walbana Naftiisa isagaa ku maragfuri.
Si kasta Hadduu u cudurdaartana (wax uma tarto).
Ha Dhaqaajinin Nabiyow Carrabka inaad Quraanka ku Dagdagto (Akhriskiisa).
Annagaa Laabtaada ku kulmin kuuna Akhriyi.
Ee Markaan akhrino Raac Akhriskiisa.
Annagaana isasaarray Cadaayntiisa.